JAFER ALI: FINFINNEEN HANDHURA OROMIYAA TAATULLEE ADDIIS ABABA AMMOO GODAANNISA GABRUMMAATI -
JAFER ALI: FINFINNEEN HANDHURA OROMIYAA TAATULLEE ADDIIS ABABA AMMOO GODAANNISA GABRUMMAATI
Qabeenya uumaa hunda keeysaa bu’urri guddaanii fii fiinxeen lafa hoggaa tahu oromooniis qabeenya uumaan badhaafame keeysaa guddichi lafuma isaati. Lafti oromoo bal’ina isii caalaa gabbatuu fii ameeytii tahuu isiitiin beekkamti. Magariisa tahuu daran tan qabeenya bishaaniitiin badhaate tahuu isiitiin jaalatamti. Gubbaa isii qofa osoo hintahin keeysi isiitiis albuda garagaraatiin kan duroome akka tahe niamanama. Dur irraa jalqabee masaanuun ollaa weeraraaf ittiduuluuniis kanumaafi.
Warraaqsa ummatoota Ethiopia kan bara 1974 irratti lafti tan qotee bulaa akka taatu labsamuun abbootii lafaa hiddaan buqqaasullee mootummaan dargii ifumaafuu abbaa lafaa haaraya itti tahuudhaan qoteebulaan ciisanyaa mootummaa malee abbaa lafaa akka hintahin shalaguun nama hindhibu. Oromoo laalchiseetiis dhugaadhaa dargiin ummata oromoo qilleensa irrattillee tahu, akka sabaati beekuudhaaf dirqamullee lafa isaa (oromiyaa) beekuudhaaf ammoo osoo hudhamuuti kufa ka’insa hinqabne kufuu mudate.
Walumaagalatti shira mootummaan habashaa dhufaa fii dabraan saganteeyfatee saba kanaan oggolchuuf tattaafatuuf oromoon yoomiyyuu taanaan duuyda shiireysee bitamee hinbeeku. Lolli walloo, kan arsiitii fii calanqootiis kanuma mirkaneeysa. Fincilli barattoota oromoo kan amma masrer planii wayyaannee kana mormuudhaan qabsiifamees ittifufa diddaa gabrummaa kan oromoon bara baraan gaggeeysaa ture hoggaa tahu wareegamtootni fincila kanaatiis gootota yoomiyyuu seenaan faarsuu akka taham ragaa bahuun barbaada.
Tags Amboo Finfinnee haroomaayaa Jaafar Alii Wallagga
Previous Ka dhadhaa afaan kaayan dhagaa afaan nama kaaya
Next FDG Ebla 2014 Ka’een Walqabatee Oromoonni 2390 Ta’an Mannneen Hidhaa Adda Addaa Keessatti Dararamaa Jiru.